घर | MyCoolClass सहकारी
MyCoolClass एक होn आफ्नो अनलाइन शिक्षण प्लेटफर्मको साथ अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षकहरूको सहकारी। We जडान एक रमाईलो, खुला र सांस्कृतिक विविध स्थानमा उत्सुक विद्यार्थीहरूको साथ संसारभरका सर्वश्रेष्ठ शिक्षकहरू। अरु के छ त, we शिक्षकहरुलाई मौका दिनुहोस् उनीहरूको कार्यस्थलको स्वामित्व राख्नुहोस्।
एक कार्यकर्ता-सहकारीको रूपमा, हामी अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी गठबन्धनले तोकेका सात सिद्धान्तहरू पालना गर्दछौं। हामी एक समाज र संयुक्त अधिराज्य को सदस्य को रूप मा यूनाइटेड किंगडम मा पंजीकृत।
आज सम्म #TEEEEEREVOLT जोड्नुहोस्
तपाई हाकिम हुनुहुन्छ। तपाईं आफ्नै तरीकाले आफ्नै पाठहरू सिर्जना गर्न स्वतन्त्र हुनुहुन्छ। तपाईं आफ्नो बुकिंग र तालिका नियन्त्रण र तपाईं आफ्नै मूल्य सेट।
हाम्रो शिक्षण प्लेटफर्ममा विद्यार्थीहरूको व्यवस्थापन गर्न सजिलो छ।
स्क्रिन सेयरिंग, फाईल प्रबन्धन, व्हाइटबोर्ड प्रयोग, र सामग्री को संगठन सरल र सहज छ। प्लेटफर्म अहिले १० भाषाहरूमा उपलब्ध छ र अधिक मार्गमा छन्!
उत्तम ज्याला, राम्रो लाभ र पूर्ण पारदर्शिता।
शिक्षकहरूले आफ्नो मासिक कमाईको १%% सहकारीमा तिर्छन्। यसले अपरेटिंग लागत र सामान्य कोषमा योगदान बढाउँदछ जुन हामीलाई बढ्न मद्दत गर्दछ। १%% को भाग पनि तपाईंको भुक्तानी गरिएको समयमा जान्छ! हामीसँग कुनै सेयरधारकले कटौती गरेनन्। सदस्यको रूपमा तपाईको पनि कम्पनी स्वामित्व हुन्छ, र कुनै नाफालाई के हुन्छ भन्नेमा तपाईको भनाइ छ।
सशुल्क समय छुट
शिक्षकहरू उनीहरूको योगदान र औसत दैनिक तलबको आधारमा भुक्तानी बिरामी वा व्यक्तिगत बिदाको days दिनहरू जम्मा गर्ने छन्। हामी शिक्षकहरू बिरामी हुँदा आफैको हेरचाह गर्न वा आय गुमाउनुपर्दा छुट्टी लिन चाहन्छौं। तपाईले राख्नु भएको कुरा मात्र लिन सक्नुहुन्छ।
रद्द गर्न को लागी कुनै दण्ड वा जरिवाना छैन यदि तपाईं बिरामी हुनुहुन्छ वा आपतकालिन छ।
नराम्रो चीजहरू हुन्छन्। यदि तपाईंसँग पारिवारिक आपतकालिन छ वा केहि दिनको बिदा लिनुपर्‍यो भने, तपाईंको कक्षा रद्द गर्नुहोस् र सहयोग टोलीलाई जानकारी दिनुहोस्।
कुनै पनि समय, कुनै पनि स्थान, कहिँ पनि
हाम्रो प्लेटफर्मले तपाईं जहाँ भए पनि र सडकले तपाईं जहाँ लैजान्दछ। तपाईलाई चाहिने सबै ईन्टरनेट जडान हो। हाम्रो प्लेटफर्म चीनमा प्रतिबन्ध बिना काम गर्दछ।
तपाईले त्यो निर्णय लिन सहयोग गर्नुहुन्छ।
प्रत्येक शिक्षकसँग को-अप-को समर्पित सदस्य-मात्र वेबसाइटमा वित्तीय जानकारी, नियम र नियमहरू, निर्वाचन सूचनाहरू, सर्वेक्षणहरू, र अधिकको पहुँच हुनेछ। कुनै पनि सदस्य निदेशक समितिको लागि पनि भाग लिन सक्छ।
सिर्जना गर्नुहोस् र सहयोग गर्नुहोस्
सिर्जना गर्नुहोस् वा सिर्जना टोलीमा सहभागी हुनुहोस् र अरू शिक्षकहरूको साथ पाठ्यक्रमहरू विकास गर्नुहोस्। पाठ्यक्रम बोर्ड द्वारा अनुमोदनको लागि तपाईंको पाठ्यक्रमहरू सबमिट गर्नुहोस् र त्यसपछि हाम्रो डिजाइन टीमले तपाईंको पाठ्यक्रम जीवनमा ल्याउनेछ! तपाइँ र तपाइँको टोलीले रोयल्टी कमाउनेछ जब तपाइँको पाठ्यक्रम बेचिन्छ!
सबैभन्दा धेरै चाहिनेलाई मद्दत गर्नुहोस्
MyCoolClass ले एक गैर नाफा कोष सिर्जना गरी आर्थिक हिडन बच्चाहरूलाई निःशुल्क शिक्षण प्रदान गर्न कार्यक्रम सुरू गर्ने योजना बनाएको छ।
लचिलो र कुशल भुक्तान
MyCoolClass सँग विभिन्न भुक्तानी विकल्पहरू छन् सुनिश्चित गर्न तपाईंले सकेसम्म कुशलतासाथ भुक्तानी प्राप्त गर्नका लागि।
सबै शिक्षकहरुलाई स्वागत छ।
यदि तपाईले प्रस्ताव गर्नु भएको विषयहरु पढ्नका लागि योग्य हुनुहुन्छ भने तपाईलाई स्वागत छ। हामी को मतलब गर्दैनौं तपाईं को हौं, तपाईं कहाँबाट हुनुहुन्छ, तपाईं कहाँ बस्नुहुन्छ वा कुन भाषा बोल्नुहुन्छ। भेदभाव राम्रो छैन र शिक्षा मा कुनै ठाउँ छैन।
यदि तपाईंलाई हामी के गर्दैछौं भन्ने मनपर्दछ र हामी बढ्दै जाँदा समर्थन देखाउन चाहन्छौं भने,
तपाईको अनुदानको कदर गरिन्छ
GoFundMe को माध्यमबाट दान गर्नुहोस्
PayPal मार्फत दान गर्नुहोस्
शिक्षकको स्वामित्वमा रहेको प्लेटफर्म को-अप
हो, यो सहि छ !!! सबै शिक्षकहरू सह-मालिक बन्छन् र कम्पनीमा भाग लिन्छन्। एक सहकारीको रूपमा, त्यहाँ कुनै पनि "बिग बॉस" वा लगानीकर्ताले सबै निर्णयहरू गर्दैनन्। प्रत्येक सदस्यको कम्पनीमा हिस्सा हुन्छ र बराबर मत।
सहकारी मध्ये सहकारी
भुक्तान गरिएको व्यक्तिगत बिदा
कुनै Draconian नीतिहरु छैन
Xहामी हाम्रो वेबसाइट मा कुकीहरु को उपयोग तपाइँ तपाइँको प्राथमिकताहरु लाई याद गरेर र दोहोरिएका भ्रमणहरु लाई सबैभन्दा सान्दर्भिक अनुभव दिन को लागी। "सबै स्वीकार गर्नुहोस्" मा क्लिक गरेर, तपाइँ सबै कुकीहरु को उपयोग को लागी सहमत हुनुहुन्छ। थप पढ्नुहोस्कुकी सेटिङहरू सबै स्वीकार्नुहोस्
एक कुकी डाटा (पाठ फाइल) को एक सानो टुक्रा हो कि एक वेबसाइट - जब एक प्रयोगकर्ता द्वारा भ्रमण गरीन्छ - तपाइँको ब्राउजर लाई तपाइँको यन्त्रमा भण्डारण गर्न को लागी तपाइँको बारेमा जानकारी, जस्तै तपाइँको भाषा प्राथमिकता वा लगइन जानकारी को लागी याद गर्न को लागी सोध्दछ। ती कुकीहरु हामी द्वारा सेट गरीन्छ र पहिलो पार्टी कुकीज भनिन्छ। हामी तेस्रो पक्षीय कुकीहरु को उपयोग गर्दछौं-जुन तपाइँको वेबसाइट को डोमेन भन्दा फरक डोमेन बाट कुकीहरु हो-हाम्रो विज्ञापन र मार्केटि efforts प्रयासहरु को लागी। कृपया हाम्रो हेर्नुहोस् गोपनीयता नीति हामी कसरी कुकीहरु को उपयोग को बारे मा अधिक जान्न को लागी।
हामी जस्तै धेरै कारणहरु को लागी कुकीहरु को उपयोग गर्दछौं;
MyCoolClass वेबसाइटहरु को आवश्यक घटक संचालन गर्न,
कक्षा र पाठ्यक्रम को लोकप्रियता को विश्लेषण गर्न
_wpfuuid 11 वर्ष यो कुकी WPForms WordPress प्लगइन द्वारा प्रयोग गरीन्छ। कुकी प्लगइन को सशुल्क संस्करण एकै प्रयोगकर्ता द्वारा प्रविष्टिहरु लाई जडान गर्न को लागी अनुमति दिईन्छ र फारम त्याग addon जस्तै केहि अतिरिक्त सुविधाहरु को लागी प्रयोग गरीन्छ।
_fbp3महिना यो कुकी फेसबुक द्वारा सेट गरीएको छ जब या त फेसबुक मा वा फेसबुक विज्ञापन द्वारा संचालित एक डिजिटल प्लेटफर्म मा, वेबसाइट मा गए पछि विज्ञापन प्रदर्शन गर्न को लागी।
fr3महिना फेसबुकले यो कुकी सेट गर्दछ वेबमा प्रयोगकर्ता ब्यवहार ट्र्याक गरेर, फेसबुक पिक्सेल वा फेसबुक सामाजिक प्लगइन मा प्रयोगकर्ताहरुलाई सान्दर्भिक विज्ञापन देखाउन को लागी।
yt- रिमोट-जडित उपकरणहरू कहिल्यै यी कुकीज एम्बेडेड यूट्यूब-भिडियो को माध्यम बाट सेट गरीएको छ।
yt- रिमोट-उपकरण आईडी कहिल्यै यी कुकीज एम्बेडेड यूट्यूब-भिडियो को माध्यम बाट सेट गरीएको छ।
_ga_QB4KJ2NX1F2वर्ष यो कुकी गुगल एनालिटिक्स द्वारा स्थापित गरिएको छ।
ध्यान दिनुहोस् १ years बर्ष 16 महिना ११ दिन ११ घण्टा यी कुकीज एम्बेडेड यूट्यूब-भिडियोहरु को माध्यम बाट सेट गरीएको छ। उनीहरु बेनामी सांख्यिकीय डाटा दर्ता गर्छन् उदाहरण को लागी कति पटक भिडियो प्रदर्शित हुन्छ र कुन सेटिंग्स प्लेब्याक को लागी प्रयोग गरीन्छ। कुनै संवेदनशील डाटा स collected्कलन हुँदैन जब सम्म तपाइँ तपाइँको गुगल खाता मा लग इन गर्नुहुन्न, त्यस अवस्थामा तपाइँको छनौट तपाइँको खाता संग जोडिएको छ, उदाहरण को लागी यदि तपाइँ एक भिडियो मा "जस्तै" क्लिक गर्नुहोस्।